Canada inotangisa chitsva chakajairwa COVID-19 chitupa chekufamba chekudzivirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Canada inotangisa chitsva chakajairwa COVID-19 chitupa chekufamba chekudzivirira
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Canada inotangisa chitsva chakajairwa COVID-19 chitupa chekufamba chekudzivirira.
Nyowani yekuCanada yedhijitari yekufamba gwaro ichave neQR kodhi yekutarisa panhandare dzendege, chiteshi chezvitima uye dzimwe nzvimbo dzekupinda.
Chitupa chehumbowo-chekudzivirira chinova nechiratidzo chekuCanada uye chinosangana neakakura epasi rese smart kadhi rehutano.
Gwaro iri rine zita remunhu, zuva rekuzvarwa uye nhoroondo yekudzivirira yeCCIDID-19 - kusanganisira kuti ndeapi madosi akatambirwa nemunhu uye paakabayiwa.
Vanhu vekuCanada havazokwanisa kukwira ndege kuenda kune dzimwe nyika kana nzendo dzekune dzimwe nyika pasina humbowo-hwe-chekuchera chitupa kutanga Mbudzi 30.
Canada Mutungamiri Justin Justin Trudeau yazivisa nhasi kuti chitupa chitsva chakamisikidzwa cheCCIDID-19 chekufambisa chiri kuparurwa nehurumende yenyika.
"Sezvo vanhu vemuCanada vanotarisa kutanga kufamba zvekare, pachave nechiratidzo chakatemerwa-chekubaya nhomba," Trudeau akadaro, achikurudzira vanhu vekuCanada vasati vaita izvi kuti vabaiwe nhomba nekukasika. "Tinogona kupedza denda iri todzokera kuzvinhu zvatinoda."
Hurumende yenyika ichabhadhara kuburitsa pasipoti yekudzivirira yakaenzana, Trudeau akadaro. "Tichatora tab."
In Kanadha, hutano hwehutano hunonyanya kuendeswa nehurumende dzepurovhinzi uye mari yakawanda nehurumende yenyika, dzimwe nguva inotungamirira kumapato ezvematongerwo enyika pamusoro pekutonga uye ndiani anobhadhara chii.
Mamwe mapurovhinzi, anosanganisira Saskatchewan, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland neLabrador uye ese matatu matunhu ekuchamhembe, akatotanga kushandisa chiyero chenyika chechiratidzo chekudzivirira, Trudeau akadaro.
Gwaro nyowani rekufambisa kwedhijitari, rakanzi Vaccine Passport, richava neQR kodhi yekutarisa panhandare dzendege, chiteshi chezvitima nedzimwe nzvimbo dzekupinda.
Isu tinoziva, Canada iri kuvhura yakamisikidzwa COVID-19 yekudzivirira pasipoti kuti zvive nyore kuti vagari vaende kunze kwenyika, Mutungamiri Justin Trudeau akazivisa. Gwaro redhijitari rakaburitswa nemusi weChina richange riine QR kodhi yekutarisa panhandare dzendege, zviteshi zvechitima nedzimwe nzvimbo dzekupinda. Sezvo zvinodikanwa zvitsva zvekudzivirira zviri kuburitswa kune vafambi, tiri kushanda kuti tive nechokwadi chekuti vanofamba vawana akavimbika.